Iza no afaka mampianatra ahy an-tserasera?
Tombony azo avy amin'ny fitoeran-javatra fitahirizana alimina
Ny zava-drehetra momba ny fitaterana ny fananana
Toetra mampiavaka ny aggregate ho an'ny beton
Hevitra hisolo sy tsy mahazatra fahita eran'izao tontolo izao
by Anjaly G
Fitsangatsanganana an'izao tontolo izao: Fahagagana voajanahary 11 mahatalanjona mahatalanjona
Betsaka ny tranonkala samihafa eran'izao tontolo izao izay mendrika hitsidika azy. Saingy miankina amin'ny karazana mpikaroka ianao. Ny olona sasany tia mahita tanàna vaovao erak'izao tontolo izao ary mijery kolontsaina samihafa, ny sasany kosa miala sasatra kokoa amin'ny…
Maninona ny ekipan'ny mpisolovava no mila manao fitsapana mihomehy tsy tapaka?
Amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fitsapana esoeso dia natao hampianarana ny mpianatra lalàna hahalala tsara ny zavatra niainany tao amin'ny efitrano fitsarana. Ny antsipiriany sy ny vela-pandrika rehetra dia tokony hampidirina mba hahazoana antoka fa miseho zava-misy izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fitsapana esoeso dia azon'ny mpisolovava matihanina atao ny mahatakatra ny tanjaka sy ny fahalemena…
Teknolojia ambony indrindra hanjaka amin'ny taona 2018
Ny famoronana mahatalanjona iray izay ahitana teknika famantarana ny tarehy ao amin'ny iPhone X an'ny Apple dia iray amin'ireo fironana amin'ny famolavolana fampiharana miavaka indrindra tamin'ny taon-dasa. Na dia mbola velona mandritra ny fotoana fohy aza ny fironana ara-teknolojia, dia hanjaka amin'ny indostrian'ny fampiharana amin'ny…
Famakafakana lalina momba ny karazana tavy rehetra
Aogositra 11, 2017
Isaky ny maheno zavatra misy ifandraisany amin'ny “matavy” ianao, dia ao anaty lafy ratsiny izany. Na dia marina aza fa ny tavy be loatra dia tsy mahasoa anao fa ny tavy dia mbola takian'ny vatana. Tsy dia henonao loatra izany, fa ny vatanao no mila tavy…
Tranonkala 7 ilaina indrindra amin'ny fitsangatsanganana any United Kingdom
Janoary 16, 2017
Ny Fanjakana anglisy dia antsoina hoe firenena Lehibe tsy very maina - fitambaran'ny firenena efatra ao anaty seta iray. Royal England sy ny fahitana azy, trano mimanda ary tranobe Wales, hatsaran-tarehy manjombona amin'ny tendrombohitra sy farihy mahafinaritra any Ekosy, tanàna taloha…
Fahadisoana 6 amin'ny famolavolana tranonkala tsy zakanao intsony
Desambra 19, 2016
Namorona tranonkala manaitra ny maso ianao nefa tsy mahasarika mpampiasa na mpampiasa mitaraina momba ny fitetezana. Mety misy lesoka vitsivitsy amin'ny famolavolana tranonkala. Amin'ny fomba mitovy, ny tranokala dia tena ilaina sy mora ampiasaina fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mihevitra…
Desambra 12, 2016
Betsaka ny bilaogy sy orinasa SEO izay samy milaza zavatra samihafa mba hahazoana laharana amin'ny pejy voalohany amin'ny Google. Tao anatin'ny 12 volana lasa izay dia nanandrana ireo teoria rehetra ireo izahay. Hametraka ireo teoria SEO rehetra ireo izahay…
Fironana ara-barotra nomerika 2017 ho an'ireo matihanina sy mpandraharaha momba ny trano
Desambra 9, 2016
Hifarana ny taona 2016, izay midika fa ny ankamaroan'ny matihanina sy ny mpandraharaha dia efa vonona tanteraka amin'ny fanomanana ny varotra nomerika ho an'ny taona ho avy. Miforona ho taona mahaliana amin'ny indostria maro izany amin'izao hidirantsika amin'ny taona 2017 izao, ary angamba…
Fironana 10 amin'ny famolavolana sary ho an'ny Rock 2017 sy ny sisa
Mipoitra ny fironana, misarika ny saina, mihalehibe ary avy eo aorian'ny hazakazaka fohy na maharitra mandritra ny volana vitsivitsy ka hatramin'ny taona maro dia tsy hita intsony. Raha ny momba ny famolavolana sary dia nahita fironana be loatra izahay niseho tao anatin'ny taona vitsivitsy…
Oktobra 19, 2016
Nandeha bara fanatanjahan-tena ianao. Mety nankany amin'ny bisy ranomandry mihitsy aza ianao. Saingy efa niditra an-tsokosoko tany ambanin'ny onja ve ianao hisotro zava-pisotro ao anaty bara iray rendrika ao anaty rano tanteraka? Ahoana ny amin'ny efitrano fandroana teo aloha imasom-bahoaka? Raha tianao…
Manofa Limos Airport Airport - Tombony sasany
Inona ny fihetsikao voalohany amin'ny fotoana ahitanao limousine iray? Ny iray amin'ireo fanehoan-kevitrao dia mety ho talanjona satria mety tsy fahita ao amin'ny faritra misy anao izany. Misy ny olona manana ny eritreritra fa izay malaza ihany no afaka mitaingina limosine fa…
Fitaovana Android 6 Tokony ho Fantatry ny Developer rehetra
Fa maninona no Android OS no safidy be mpitia indrindra ho an'ny mpamorona? Android dia mahatonga ny zavatra ho tsotra ary rafitra fandidiana finday avo lenta azo zahana ary tena mpampiasa koa. Ny fampidirana fitaovana marobe dia nanamora ny famoronana fampiharana Android…
Ahoana no manidina kilasy voalohany amin'ny fihenam-bidy
Ny fitsangatsanganana kilasy voalohany dia lafo vidy izay tsy zakan'ny olona maro, fa raha manana sidina lavitra be eo alohanao ianao, ny fandaniana ny vola fanampiny amin'ny voalohany na ny kilasy fandraharahana dia mety hahatonga ny dianao ho mahazo aina kokoa. Raha mamandrika ny tapakilananao amin'ny Internet ianao dia matetika tsy…
Fomba fialamboly ho an'ireo Malayalees any Etazonia
Malayalam dia heverina ho iray amin'ireo fiteny lehibe any India. Na dia ny fiteny Malay amin'ny fiteny Kerala aza ny ankamaroan'ny Malayalam, saingy be mpampiasa any amin'ny fanjakana hafa toa an'i Tamil Nadu sy Karnataka izany. Araka ny fikarohana, manodidina ny 38 tapitrisa ny isan'ny Indiana…
Zavatra 5 Tokony ho Fantatrao Alohan'ny hidirana ao amin'ny Akademia Mozika
Ny sekoly mozika dia sehatra iray tena ilaina tokoa ho an'ireo mpitendry zavamaniry maniry rehetra, izay te-hamolavola ny fahaizany amin'ny maha-ampahan'ny tontolo iray manampy amin'ny famokarana mpitendry zavamaneno tena mahay zavatra maro. Misy ny miady hevitra fa, raha tena manan-talenta ianao dia…
Ahoana no hanampiana ny chef anao hahatratra ny fifandanjana amin'ny fiainana sy ny fiainana tsara
Ny maha-chef ambony ao amin'ny trano fisakafoanana malaza dia midika toerana tsy manam-paharoa sy haja amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Ny chef dia afaka manamboatra trano fandraisam-bahiny. Fantatro ny trano fisakafoanana misy mozika mivantana eo akaikiko izay nisy ny mozika tsy an-kanavaka fa ny…
Mandehana mitsangatsangana any Delhi hizaha azy mbola tsy nisy toy izany
New Delhi dia tanàna mampientanentana sy mahavariana ihany koa nefa mety hahagaga azy ireo ihany koa ho an'ireo olona izay tsy mahalala firy izay hatao ao an-tanàna. Ity lahatsoratra ity dia tsy milaza aminao ny antony mahaliana ny tanàna…
Ahoana ny fomba hitsitsiana bebe kokoa amin'ny lalana manaraka LA
Mety ho sarotra ny mijanona mitsitsy amin'ny dia lavitra, fa azo atao izany raha mikasa mialoha sy mifikitra amin'ny drafitrao ianao. Ny fandaminana fitsangatsanganana any Los Angeles dia mety hahagaga anao amin'ny zavatra maro hita sy azo atao, ka tsara raha manome…
Olana mahazatra amin'ny ora fatoriana atrehin'ny ankizy sy ny fomba hamahana izany
Misedra olana amin'ny torimaso indray ve ny zanakao? Ny tsy fahombiazana amin'ny famahana ny olana dia mety ho nofy ratsy ho anao sy ny zanakao. Fikarohana marobe no mampiseho fa ny ankizy manana fahazarana matory tsy ara-dalàna dia mety hiaina fivoarana ara-batana marim-pototra sy tsy fahaizan'ny mianatra. Ilay lehibe…
1 2 3 ... 386 Manaraka
Error: Tsy hita ny fahana.
Mankanesa any amin'ny pejin'ny fikandrana Instagram Feed mba hamoronana fahana.